Dhamma Viman<>ဗုဒ္ဓဓမ္မဖြင့် သင်၏ ဘ၀ကို မြင့်စေလော့
ပိုင်းလော့ ဆရာတော်ကြီး နော့သ်ကာရိုလိုင်းနားပြည်နယ်၊ ဓမ္မဗိမာန်ကျောင်း၊
6612 Brass Rd, Jamestown, NC 27282 သို့ ကြွရောက် သီတင်းသုံးစဉ် ကမ္မဋ္ဌာန်းတရားတော်များဟောကြားပြမည့် အချိန်များ။။
Saturday, June 29>>> ပထမအချိန်- နေ့ လည် ၁း၀၀ နာရီ (နေ့ ဆွမ်းကပ်ပြီး)
ဒုတိယအချိန်- ညနေ ၆း၀၀ နာရီ
Sunday, June 30>>> ပထမအချိန်- နံနက် ၈း၃၀ နာရီ
ဒုတိယအချိန်- နေ့ လည်-၁း၀၀ နာရီ (နေ့ ဆွမ်းကပ်ပြီး)
တတိယအချိန်- ညနေ-၆း၀၀ နာရီ
6612 Brass Rd, Jamestown, NC 27282
Posted by dhammaviman No comments: Links to this post
၊မိုးညှင်းသိဂီ င်္ကျောင်းတိုက်မှ ဆရာတော
မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရန်ကုန်မြို့ ၊မိုးညှင်းသိဂီ င်္ကျောင်းတိုက်မှ အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် ကမ္မဋ္ဌာန်းတရားတော်များဟောကြားပြသလျှက်ရှိသော (ပိုင်းလော့ ဆရာတော်)သည် June 29-30, 2013 ရက်နေ့ တွင် နော့သ်ကာရိုလိုင်းနားပြည်နယ်၊ ဓမ္မဗိမာန်ကျောင်း၊ 6612 Brass Rd, Jamestown, NC 27282 သို့ ကြွရောက် သီတင်းသုံးမည်ဖြစ်ကြောင်း အကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။ ဆရာတော်ကြွရောက်သီတင်းသုံးစဉ်ရက်များအတွင်း အောက်ပါကုသိုလ်များ ပြုလုပ်နိုင်ကြောင်း မေတ္တာဖြင့် အကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။
Saturday, June 29 >>အရုဏ်ဆွမ်း၊ နေ့ ဆွမ်း စုပေါင်းဆက်ကပ်၊ တရားနာ။
Sunday, June 30, ရက် >>အရုဏ်ဆွမ်း၊ နေ့ ဆွမ်း စုပေါင်းဆက်ကပ်၊ တရားနာ။
နေ့ ဆွမ်းကပ်ပြီးလျှင် တရားပွဲပြုလုပ်ရန် စီစဉ်ထားပါသည်။ အကယ်၍ ညနေပိုင်းတွင် ကမ္မဋ္ဌာန်းတရားတော် နာယူလိုသူများ၊ ကျောင်းမှာညအိပ်၍ တရားအားထုတ်လိုသူများရှိပါက အောက်ပါဖုန်းနံပါတ်ကို ဆက်၍ အကြောင်းကြားပါ။ နေရာထိုင်ခင်းများစီစဉ်ပေးပါမည်။
Warso-robe Offering Ceremony and Buddhist Ordination Ceremony.
You are cordially invited to participate in Warso-robe Offering Ceremony and Buddhist Ordination Ceremony.
Place: Dhamma Viman Monastery, 6612 Brass Rd, Jamestown, NC 27282.
Dhamma Viman Monastery
Myanmar Buddhist Association
2013 Thingyan Video Collection
05/30/2013) နေ့ တွင်အာဂန္တု ဆရာတော်(၄)ပါး ကြွရောက် လာပါမည်။
(05/30/2013)နေ့ တွင်အာဂန္တုဆရာတော်(၄)ပါး NC-ဓမ္မဗိမာန်ကျောင်းသို့ 
၁။ ဆရာတော်အရှင်သိရီန္ဒ (သီရိမင်္ဂလာဆရာတော်၊ OR, USA)
၂။ ဆရာတော် အရှင်ဉာဏိကာဘိဝံသ(မုဒိတာရွှေကျောင်း၊ CA, USA)
၃၊၊ တိပိဋကဓရဆရာတော် အရှင်ဂန္ဓမာလာလင်္ကာရ(မင်းကွန်းတောင်ရိုး၊ မြန်မာနိုင်ငံ)
၄။ဆရာတော် အရှင်အဂ္ဂ၀ံသ (မင်းကွန်းတောင်ရိုး၊ မြန်မာနိုင်ငံ)
အောက်ပါ နေ့ ရက်များတွင် ဆွမ်းများ ကပ်လှူကြကာ ကုသိုလ်များ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
အရုဏ်ဆွမ်း စုပေါင်းနေ့ ဆွမ်းကပ်ပွဲ
June 02, Sunday
June 03, Monday
High Point Thingyan 2013 Highlight
High Point Thingyan 2013
ဓမ္မဗိမာန် ကျောင်းမှာ ကျင်းပသော မြန်မာ ရိုးရာ နှစ်သစ်ကူးပွဲ နှင့် သင်္ကြန်ပွဲတော်ကို ဒီကနေ မေလ ၂၆ ရက်နေ့ တွင် အောင်မြင်စွာကျင်းပပြီးစီးခဲ့ပါကြောင်း ဖော်ပြအပ်ပါသည်၊ ဓာတ်ပုံဗွီဒီယို များကို မကြာခင် ပိုမို စုံလင်စွာ ဖော်ပြပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်..၊
ဝေးမြေရပ်ခြား၊ တို့ နေညားလည်း၊
ဘယ်ခါမစွန့် ၊ စိတ်မရွန့့်ဘဲ၊
မတွန့် သဒ္ဓါ၊ ခိုင်မြဲစွာဖြင့်၊
ခေမာသောင်ကမ်း၊ နိဗ္ဗာန်နန်းသို့ ၊
တက်လှန်းဖို့ ရန်၊ သန္ဒိဋ္ဌာန်လော့။
Dhamma Viman (10)